Sida Loo Soo Degsado Muusikada Tayada Sare leh ee FLAC oo Bilaash ah | War gadget
Sida loogu soo dejisto muusig tayo sare leh FLAC bilaash
Paco L Gutierrez | | General, Sawir iyo dhawaq, Software
Maalmahan way adagtahay in qiil loo helo soo dejinta muusikada internetka, hadda wax walba waxaa nala siiyaa iyada oo loo marayo qulqulka iyada oo aan la soo dejisanaynin dheeri ah ama baahida loo qabo booska qalabkayaga. Laakiin maxaa dhacaya haddii waxa aan raadineyno ay yihiin tayada ugu sareysa? Waa hagaag asal ahaan ma jiro codsi qulquli ah oo na siin kara heerka ugu sarreeya ee tayada aan raadineyno haddii aan rabno inaan tijaabino nidaamka codka ama aan rabno inaan ku dabbaqno munaasabadaha mugga sareeya. Qeyb ahaan tani waxay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in muusikada codsiyada sida Spotify ama Apple Music lagu cadaadiyo inay ku baab'iiso batteri iyo xog ka yar heerkayaga.
Noocyada ugu isticmaalka badan ee lagu tijaabiyo qalabka codka ama dhacdooyinka waa «FLAC». Qaab taasi waa wax badan ka caan yar yahay MP3, laakiin si weyn uga sarreeya tayada codka, ilaa heer ah in markaan dhageysano muusikada FLAC, waxaan umuuqan doonaa dhago wasakh ah markaan dhageysano MP3 markale. Halkan waxaan ku faahfaahin doonnaa waxa muusigga FLAC ku saabsan yahay iyo meelaha aad kala soo bixi karto muusikada qaabkan gaarka ah.
1 Waa maxay muusiga FLAC?
2 Halka laga dhagaysto muusikada FLAC
3 Sida loo soo dejiyo muusikada FLAC
3.4 Dib u eegisCC
3.8 Maqalka Sare ee Sare
Waa maxay muusiga FLAC?
FLAC waa ereyga loo soo gaabiyo Free Code Lossless Audio Codec, waa Codec cod sameeya oo sameeya maqal dijitaal ah oo bilaa khasaaro ah. Faylka waa la dhimi karaa ilaa 50% cabirkiisa iyada oo aan hoos loo dhigeynin tayada gabi ahaanba. In kasta oo laga yaabo inaanay sidaada oo kale u muuqan, haddana waa qaab soo jiray sannado badan oo ahaa mashruuc uu soo diyaariyay barnaamij-yaqaan Josh Colson.
Aasaaska Xiph.org iyo mashruuca FLAC ayaa mas'uul ka ahaa in lagu daro Codec-ka riixitaanka cusub, isla kan mas'uulka ka ah kombaresarada kale sida Icecast, Vorbis ama Theora iyo kuwa kale. Bishii Meey 26, 2013, La Luz waxay aragtay nooca 1.3.0 ee Flac.
Haddii aan raadineyno inaan kaydinno oo aan xafidno feylashayada muusiga qaab qaab dhijitaal ah, qaabkani shaki la’aan waa xulashada ugu fiican. Waxa ugu fiican ayaa ah inuu lacag la’aan yahay oo koodhkiisu uu yahay lacag la’aan, sidaa awgeedna lagu fulin karo wixii agab ah ee ah “Hardware” iyo “Software”.
Halka laga dhagaysto muusikada FLAC
Si aad u dhageysato nooc kasta oo feyl maqal ah waxaad u baahan tahay barnaamijyo la jaan qaadi kara, in kastoo badankood ay awood u leeyihiin inay soo saaraan Koodhadhkan. Waxaan soo qaadan doonaa barnaamijyo xul ah si aad ugu raaxeysato codka ugu fiican waqti kasta.
Ciyaaryahan fudud oo si fudud loo isticmaalo, wuxuu ka cunaa wax yar ilaha kombiyuutarka, waxay aqoonsan tahay dhammaan faylasha maqalka ee la heli karo iyo in la haysto. Waxay ka kooban tahay dhowr shey oo qaabeynta qaabeynta ah si aan ugu habeynno sida aan u jecleynno, waxaa kale oo ku jira tifaftiraha sumadda iyo faylka beddela. Waxay taageertaa idaacadaha internetka. Annaguna waanu haynaa diyaar u ah iPhone ama Android.
Ilaa hadda kuwa ugu caansan, VLC waa il furan oo fiidiyoow iyo muusig dhegeysi leh iyo qaabdhismeed. La jaan qaadi kara ku dhowaad dhammaan noocyada feylka feylka badan. Waxay awood u leedahay inay soo saarto walxaha koodhka iyada oo aan la soo degsan baakado dheeri ah. Waxay sidoo kale na siineysaa awood aan ku ciyaarno feylal fara badan oo lagu keydiyo qaab muuqaal ah, sida DVD-yada ama Bluray qaraarada u dhexeeya 480p ilaa 4K. Waa la heli karaa labadaba macOS y Windows sida iPhone y Android.
Ciyaaryahan ilo xiran oo gebi ahaanba xor ah. Waa ciyaartoy diirada saaraya isticmaaleyaasha loo isticmaalo inay la jaan qaadaan maktabadooda maqalka ee dhijitaalka ah, maaddaama ay leedahay tiro badan oo xulashooyin ah oo aan ku khasaari karno nafteenna. Waxay noqon kartaa beddel weyn oo MacOS ah iTunes iyo sidoo kale Windows. Tilmaamuhu waa shaki la'aan in la qaabeynayo, sidoo kale waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fudud ee aan ku heli karno bilaash. Waxay u leedahay nooc loogu talagalay MacOS, Windows iyo noocyada mobilada ee iPhone o Android.
Haddii aad xiisaynayso, waxaad isku dayi kartaa Amazon Music Unlimited 30 maalmood oo bilaash ah leh in ka badan 70 milyan oo heesood
Sida loo soo dejiyo muusikada FLAC
Waxaan arki doonnaa xulasho degello internet ah oo lagu kalsoonaan karo oo aan kala soo dagsan karno muusikadeena qaab FLAC ah, markii la soo dejiyo waxaan ku raaxeysan karnaa mid kasta oo ka mid ah ciyaartoyda aan kor kusoo xusnay.
Boggan internetka ayaa si qaas ah loogu talagalay in lagu soo rogo waxyaabaha muusikada qaab FLAC ah. Waxay leedahay astaan ​​aan la koobi karayn oo isugu jira noocyo iyo xilliyo kala duwan. Laakiin waxa ugu fiican ee ku saabsan boggan shabakaddan shaki la’aan waa xaqiiqda haysashada qalab tayo leh dhammaan dhadhanka, taas oo aad leedahay dhadhanka aad leedahay, waxaa hubaal ah in aad heli doonto waxa aad raadineyso iyo tayada ugu fiican. Dhammaan waxyaabaha ku jira degelkan waa bilaash. Wax la mahadiyo, maaddaama aan wada jecel nahay muusigga wanaagsan laakiin dhammaanteen kuma wada heli karno bixinta.
Websaydh asal ahaan ka soo jeeda Vietnam, oo leh mid ka mid ah rikoodhada muusikada ee ugu weyn ee aan ka heli doonno internetka qaab FLAC ah. Waxa ugu cajiibka badan shaki la'aan waa in waxa ku jira oo dhami ay lacag la’aan yihiin oo aanu ku jirin xayeysiis marin habaabin ah, sidaa darteed soo degsashada albumyada aanu jecel nahay waa mid aad u fudud. Faa'iidada kale ee degelkani waa taas kuma koobayno qaab keliya, laakiin wuxuu na siinayaa jaanis weyn oo ka mid ah xulashooyinka aan ka helno: MP3, M4A iyo dabcan qaab tayo sare leh oo FLAC ah. Buugga buug-gacmeedkiisu waa mid aad u deeqsinimo leh waxaadna ka heli kartaa muusikada dhammaan xilliyada oo dhan ama xitaa filimka iyo muusigga fiidiyoowga ciyaarta.
Muusikada Qadiimiga ah kama maqnaan karin xulashadan, mid ka mid ah noocyada loogu baahan yahay qaabka FLAC. Iyada oo la heli karo codsi loogu talagalay Android oo bixisa buugga weyn ee muusikada caadiga ah. Waxaan heli karnaa muusikada iyo dhameystirka albums aan dhibaato lahayn. Ku raaxayso isdhexgalka saaxiibtinimo saaxiibtinimo leh, iyo sidoo kale mashiin raadin aad u faa'iido badan oo kuu oggolaanaya inaad sahamiso dhammaan xulashooyinka oo aad hesho waxa aan raadineyno. Mashruucani wuxuu bixiyaa 14 maalmood oo tijaabo ah oo bilaash ah si loogu isticmaalo waxa ku jira, waqtigan ka dib waa inaad bixisaa lacag bixin sanadle ah oo ah € 140Waxay u muuqan kartaa wax qaali ah laakiin haddii aad jeceshahay noocyadan muusigga ah, waxay shaki la'aan kuu qalmi doontaa dinaar kasta oo la maalgeliyo.
Primephonic - Daawashada Muusikada Qadiimiga ah
Dib u eegisCC
Mid ka mid ah beddelka ugu wanaagsan ee loogu talagalay kuwa jecel muusikada tayada ugu fiican. Madal internet oo gaar loo leeyahay oo bixisa maktabad weyn oo muusig ah. In kastoo Kaliya kuma koobna muusikada maxaa yeelay waxaan sidoo kale heli doonnaa fiidiyoow, buugaag, softiweer iyo majaajillo. Qodobka taban ee boggan shabakadani shaki kuma jiro inaadan si xor ah u geli karin, laakiin in lagu helo martiqaad laga helay isticmaale. In kasta oo aan haysanno ikhtiyaar kale oo ka fudud taasna waa tan aan awoodno codso wareysi ku saabsan mowduucyada la xiriira muusikadaHaddii aan ka guuleysanno, waxaan iska diiwaan gelin karnaa Redactec oo aan kala soo bixi karnaa muusig aan tiro lahayn.
Waxaan u nimid ikhtiyaarka ugu fiican ee roogayaasha ugu badan. Websaydhkan waxaan ka soo degsan karnaa xad-dhaaf ah waxyaabaha muusigga ah oo ku jira qaabka FLAC ee nooca dhagaxa weyn. Waa madal gebi ahaanba bilaash ah waxayna leedahay tiro badan oo albums, kali ah, riwaayadaha iyo waxyaabo kale oo qaab FLAC ah. Dhammaan alaabtaadu waxay ku jirtaa serverka sida MediaFire ama Mega, markaa soo dejintu waa mid aad u fudud. Waxa ugu fiican ee ku saabsan boggan ayaa ah in waxa ku jira gabi ahaanba bilaash yahay, sidaa darteed waxaan kordhin karnaa ururinta aan la cayimin oo aan ka baqaynin kharashyo dheeri ah.
Xaaladdan oo kale waa degel lacag bixin ah, laakiin shaki la'aan ee ugu raaxada badan uguna abaalmarinta badan. Marka lagu daro inaad ka heli karto muusikada ururinta ballaaran, waxaad fursad u leedahay inaad sahamiso dhammaan noocyada noocyada, nooc kasta oo aan dooneyno. Qaabka FLAC wuxuu leeyahay joogitaan xoogan sidaa darteed tayada waa la hubiyaa. Maaddaama ay yihiin wax dheeri ah oo aanaan ka heli karin inta soo hartay, degelkan wuxuu na siinayaa suurtagalnimada inaan ka faa'iideysanno waxyaabaha ay ka kooban tahay qulqulka iyada oo aan loo baahnayn in wax la soo dejiyo, sidaas darteed waxaan toos u dhageysan karnaa muusikada.
Websaydh na siiya mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee ku habboon qaabka FLAC ee internetka oo dhan bilaash. Liiskaaga waxaa ka mid ah in kabadan 20 nooc oo muusig ah leh warqad casriyeysan oo si joogto ah loo cusbooneysiiyo. Sidoo kale waa mid ka mid ah bogaggaas waxaa lagu gartaa helitaanka marin aad u fudud, taas oo macnaheedu yahay inaan gebi ahaanba marin u heli doonno aan xadidnayn alaabtaada adoon bixin hal €. Si aad ugu dhaqaaqdo soo dejinta album kasta, kaliya ka raadi mashiinka raadintaada, fur oo tag tag xiriirkeeda soo dejinta.
Maqalka Sare ee Sare
Websaydh kale oo lacag la bixiyo, oo leh maktabad ballaadhan oo ay ka buuxaan muusig dhammaan noocyada la yaqaan. Waxay bixisaa suurtagalnimada helitaanka sawirro qaab aan dooneyno. In kasta oo waxa ina daneynaya ay yihiin waxyaabaha ka jira FLAC oo xaaladdan marka la joogo ay aad u badan tahay. Maaddaama ay hadda tahay qaabka loogu jecel yahay dhammaan kuwa jecel muusikada hi-fi. Xaaladdan oo kale waxaan sidoo kale ka helnaa tiro badan oo ah kuwan raadkaygay heesaha ah oo qaab qaab FLAC ah. Bilaash maaha laakiin shaki la'aan waa inaan dhahnaa ma fududa in la helo dukaan internetka ah oo leh muusig qaabkan gaarka ah, kaas oo labadaba fudud oo la isticmaali karo iyo hawlgal aad u fiican. Lacag-bixintu waxay noqon kartaa mid sanadle ah ama bille ah, sidaa darteed waxaan haynaa xarumo markii aan bixinayno khidmadaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Sida loogu soo dejisto muusig tayo sare leh FLAC bilaash
Daawo GS Pro, saacadda "qadarin" ugu badan ee Sharaf